…..ပြတ်ချင်အုံးဟဲ့… (အရက်)…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » …..ပြတ်ချင်အုံးဟဲ့… (အရက်)….
Posted by tharli kar on Jul 9, 2012 in Copy/Paste | 24 comments
ခင်ဗျားကလည်း နာမည်တတ်တာမကြိုက်ဘူး…။ ကျုပ်ကလည်း တတ်ချင်နေတယ်..။
တခြားမဟုတ်ပါဘူး…..။ အရက်ပြတ်ဖို့အရေးကို ခင်ဗျားက တစ်ကူးတကန့်တောင်းဆို
ကျုပ်က တရားဟောဓမ္မကထိကတော့မဟုတ်ဘူး…..ဒါပေမယ့်…ခင်ဗျားကိုလည်း ပြတ်
ရာပြတ်ကြောင်း(အရက်) ဆွေးနွေးချင်စိတ်ကလည်းပေါက်မိတာမို့ ပြောတယ်လို့ပဲ
ခင်ဗျားလည်း အသိပါ။ အဲဒါ…အရက်ကောင်းလို့ဆိုတာ…..ဘယ်အရက်သမားကမှ
အဲ……..ဒါကတော့….အသက်ပေးပြီး အရက်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက် ကျုပ်ဘက်က
(အပူ)တွေကို မေ့ထားနိုင်တယ်လေ…….။ မကောင်းဘူးလား….။ ဒီအချက်တွေကိုတော့
ဒီကြားထဲမှာ ကိုယ်ကမေ့ထားနိုင်ပေမယ့် မိဘဖြစ်သူ..မိန်းမဖြစ်သူတွေက…သားတွေ
သမီးတွေက ပြောပြကြ၊ ဆိုပြကြပြီဆိုလျှင်လည်း…..ကိုယ်သောက်ထားတဲ့ အရက်ရှိန်
နဲ့ ဟိန်းလိုက်ဟောက်လိုက်ရင်…….အားလုံးငြိမ်သွားတတ်ကြတာပဲ…..။ ပထမပိုင်းမှာ
တော့…. မိဘတွေနဲ့ မိန်းမက နဲနဲကလန်ချင်တတ်ကြသေးတာပေါ့…..။ နောက်ပိုင်းကြ
တော့ ကိုယ့်ကို လုံးဝကို စာရင်းထဲထည့်ပြီးတော့တောင်မှ မပြောကြတော့တာဆိုတော့
ဒါကိုမှ….ခင်ဗျားက အရက်မကောင်းပါဘူးလို့….မပြောပေမယ့် အရက်ပြတ်ချင်နေပါ
တကယ်တော့….ခင်ဗျားက သူများတွေကမကောင်းဘူးပြောလို့ အရက်ပြတ်ချင်တာ
ဆိုရင်တော့အရူးပဲ……လို့ ပြောရမှာပါ။ သူများပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုတာ ဘယ်မှာလာ
ဘုရားဟောတဲ့ ရာဟုလောဝါဠ သုတ်မှာပါသလိုပြောရရင်……
၁။ မသောက်ခင်မှာ…သောက်ပြီးတဲ့ အခြေအနေတွေရဲ့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် မကောင်း
ပြတ်မှာပေါ့ဗျာ…။ ကျုပ်ဘက်ကပြောရရင်တော့..အရက်ရဲ့မကောင်းမှုကို တကယ်
ကို သုံးသပ်နိုင်သွားရင်တော့….အမြင်မှန်သွားပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ…။ အမြင်မှန်ရင်တော့
(မှတ်ချက်…….) အရက်၏မကောင်းချက်များကို ပြောလျှင်…..အရက်သမားများမှ…
(….ဖတ်ရှုမိသူအပေါင်းမှ….. ဝင်ရောက်၍ဆွေးနွေး အရက်ပြတ်ရာပြတ်ကြောင်းကို
လက်မခံချင်ပေမယ့် ကြိုးစားရင်ရနိုင်သလိုပါ့ ကိုသာလိကာ ..???????????????????
minma haw ခင်ဗျာ…..ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါ…။
အရက်ကိုသောက်တာမှာ.. ရည်ရွယ်ချက်ကိုက မတူတာမို့.. ပြောစရာသိပ်မရှိ..
ကျုပ်အပါအဝင်.. အနောက်နိုင်ငံက လူတော်တော်များများက.. အရက်ကို ပျော်လို့သောက်ကြသဗျ…
စိတ်ညစ်ရင်.. မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရင်.. သောကတွေဖြစ်ရင်.. ဆေးသောက်ရပါတယ်ခင်ဗျ..
ဒါမှမဟုတ်.. စိတ်ပညာဆရာဝန်တွေဆီ.. ဘုန်းကြီးတွေဆီ..ပညာရျင်တွေဆီမှာ.. အကြံညဏ်ယူ.. ဝန်ခံဖြေရှင်းလုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… မြန်မာတွေ.. ဘာကြောင့်.. လူသူကင်းဝေးရာပြေး.. ဝိပဿနာကြတယ်ဆိုတဲ့.. အစွန်းအစလေး ဖမ်းမိသွားပါတယ်..
ဂျော်နီလမ်းလျောက် ငမဲတူ ၂ထပ်ကွမ်း ကို ပျော်လို့ သောက်သပေါ့နော်….
ကျုပ် …အရက်ဖြတ်တော့မယ် သဂျီး..
အိုဘယ့် ရယ်မီလေးရယ်မှ မာတင်လိုက်တိုင်း…
ဟိုမေးစေ့အကွဲလေးပဲ မျက်စိထဲ မြင်မြင်နေလို့..
သူကြီးရေ……အာရုံရှောင်တဲ့ပညာဟာ တကယ်ဆိုရင် ကောင်းသလိုပါပဲခင်ဗျ………..
ခုတစ်လော ကြားဖူးတာလေးရှိတယ်…။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပေါ့……
အဲဒီဒေါသထွက်စရာရဲ့ အပိုင်းကဏ္ဍကို ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်…ဒေါသထွက်လို့မရတော့
ဘူးတဲ့…။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုစော်ကားမော်ကားလုပ်လို့ မကျေနပ်ရင် အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီ
သွားပြီး….ဒေါသထွက်စရာအကန့်ကို cut out လုပ်လိုက်ရင်….ဒေါသထွက်လို့မရဘူးဆိုတော့
အရက်ရဲ့ အကောင်းအဆိုး ဆိုတာရှိမယ်။ အနည်းအများဆိုတာလဲ ရှီတယ်။
အရက်ပြတ်ဖို့ရာကတော့… အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
တရားသဘောအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ …. ဒုက္ခကိုသိဖို့ရာ တခုတည်းသော အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ ဒုက္ခကိုသိလိုက်တာနဲ့ ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရားကို ပယ်လိုက်မှာပဲတဲ့။ သာမန်သိရုံတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြီးဟာ အဆိပ်ရေတွေ။ သောက်ရင် မချိမဆန့်ခံစားရမှာ။ ပြီးတော့ သေမှာ။ သေချာပေါက်ကိုသေမှာ။ အဲဒီလိုသိနေတဲ့သူ ဟာ ….မသေချင်တဲ့သူဟာ…. အဲဒီအဆိပ်ခွက်ကို သောက်ခိုင်းရင် သောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲထင်မြင်မိပါကြောင်း
ကိုယ့်အတွင်းစိတ်က မသောက်ချင်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ရပြီ။
အကောင်းဆုံးကတော့ လူတွေပါးစပ်က အမြုပ်ထွက်မတတ်ပြောတတ်ကြတဲ့
ဘဝတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ….ယောက်ကျား၊ မိန်းမ၊ မယ်သီလနဲ့၊ ဘုန်းကြီး၊
ဘိန်း ဘင်း ကဇော် လှော်စာ အရက် ဖြတ်ရခက်
အရက်သောက်ရင် ဒုက္ခအားလုံးကို မေ့နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်
အမူးပြေရင် ဒီကိစ္စက ပြီးသွားတာမှမဟုတ်တာ
အာရုံရှောင်တဲ့ပညာပေါ့ဗျာ…ဥပမာပေးရရင် တော်တော်များများ ရိပ်သာတွေမှာ
တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မယုံရင်သောက်ကြည့်….မယုံရင် ရိပ်သာသွားကြည့်……..
ကျွန်တော်ကတော့ ၂ မျိုးပဲ။ တွေ့ရင်သောက်တယ်။ မတွေ့ရင်လိုက်ရှာပြီးသောက်တယ် :-)
ကိုသာလိကာ ဧ။် စာကိုဖတ်လျှင်ဖတ်ချင်းပင် လေချင်တက်လာရျ် ယခုပင် ဆိုင်ထဲသို့ဆင်းသွားပါဂျောင်း
လောလောဆယ် ဘီယာ သုံးလေးခွက်လောက် နှင့်အာသာသွားဖြေပြီးလျှင် ပြန်တက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ကျွန်တော် သည် အရက်ကို မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းမျှ ပုတ်ခတ်စော်ကားမည့်သူ မဟုတ်ပါဂျောင်း။
ဘယ်တော့မှ မပြတ် …
မူးချင်လို့ သောက်တဲ့အရက် …
သေကာမှ ပြတ်..ပြတ်..ပြတ်…. အဟတ် ဟတ် ….
(တကယ်တော့ အရက် ပြတ်တယ်ဆိုတာ စိတ်က သာ လျှင် အဓိကလို့ မြင်မိပါတယ်)
ဂယ်တော့သိဘူးးး. ဝင်ပွားကြည့်တာ …
အရက်မသောက်ကြဘူးဆိုရင် အရက်ထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေ၊ ကုမ္မဏီတွေမွဲကုန်မှာပေါ့။
ဒါကြောင့်သူတို့ ကလည်း ကျေးဇူးတုံပြန်သောအားဖြင့်လည်း ကားတွေ၊ ဖုန်းတွေ နဲ့အမျိုးမျိုး ဆွယ်နေတာပေါ့။ အားပေးလိုက်ကြပါလို့………
အရက်သောက်ရင် အားလုံးကိုမေ့တယ်ဆိုတာ တကယ်မေ့တာလား။ မေ့တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံခိုင်းတာလား။ အဲဒီ့နှစ်ခုကို တကယ်မရှင်းပါ။ အရက်မူးတဲ့ ပမာဏတော့ ကွာမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ အရမ်းကိုမူးပြီး မှောက်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့ အားလုံးမေ့တာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မမှောက်သေးသ၍ကတော့ မေ့တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ခဏတာစိတ်ညစ်စရာတွေကို မေ့ချင်ရင်တော့ လူမှန်းမသိ၊ သူမှန်းမသိ၊ လုံးဝမှောက်တဲ့အထိသောက်ပါမှဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အသက်တစ်ရာမနေရပေမယ့် အမှုတစ်ရာလောက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူဘဝ၊ လူ့လောကမှာ စိတ်ညစ်စရာကြုံတိုင်း ခဏတာမေ့ပျောက်ချင်လို့ အရက်သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ (အပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်းသောက်မယ်ဆိုရင်တော့) ထနိုင်စရာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်။
ဒါကြောင့် အရက်သောက်ရင် အားလုံးကို တကယ်မေ့၊ မမေ့ ပြောပြကြပါဦး။ သိချင်လို့ပါ။
အရက်သောက်ပြီးရင် ဘာမှမသိတော့ဘူး ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်လို့ လုပ်မိမှန်းမသိဘူး ဆိုပေမယ့် အီအီးကျွေးရင် မစားဘူး ဆိုတဲ့စကားက ဘာကိုပြောချင်တာလဲဟင်၊ အရက်သောက်တဲ့သူတွေဆီက ကြားဖူးတဲ့စကားပါ၊ အသိဉာဏ်လွတ်သလား မလွတ်သလား ကိုကိုယမကာတို့ အမှန်အတိုင်းဖြေပေးပါလား … ဟီးး သိချင်ရုံသက်သက်ပါနော် …
တန်ဆေး လွန်ဘေးမို ့အူးဗိုက်တို ့ကလျော့သောက်ပါ၏။